Mbola betsaka amin’ireo toeram-pivarotana toaka eto amintsika na BAR no tsy manara-dalàna. Hatreto mantsy, indrindra tao alohan’iny fetin’ny Pentekosta iny dia mbola misy hatrany ireo mivoha mihoatra ny amin’ny 9 ora alina. Nidina ifotony nanao fisafoana nanara-maso azy ireo ny polisy avy eo amin’ny Boriborintany fahafito eny 67 ha ny faran’ny herinandro teo. Nisy tamin’ireo tsy nanara-dalàna no tratra ka olona 22 no fantatra fa notazonina. Nisy tamin’ireto farany no tsy nitondra kara-panondro akory, antontan-taratasy izay tsy tokony hiala any amin’ny olona iray, indrindra raha alina ny andro. Taorian’ity fitiliana ity dia nisy teny amin’ny Rocade eny amin’ny lalam-baovao 67 ha ihany koa ireo mpitandro ny filaminana nanara-maso ireo fiara mifanenjika amin’ny alina sy minia mandeha mafy ka ahiana handratra na hamono olona. Mbola hitohy hatrany ny hetsika, raha ny fantatra.